နံမယ်ကျော် Versailles နန်းတော်နဲ့ဧရာမ ပန်းခြံ – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » နံမယ်ကျော် Versailles နန်းတော်နဲ့ဧရာမ ပန်းခြံ – ၂
နံမယ်ကျော် Versailles နန်းတော်နဲ့ဧရာမ ပန်းခြံ – ၂
Posted by Kyaemon on Dec 30, 2013 in Arts & Humanities, Cultures, Education, Entertainment, History, Photography, Style & Beauty, Travel |9comments
ရွှေရောင်ခြယ် တံခါးမ ကြီး၊ ရွှေပန်းပု တွေနဲ့ကြိုဆို
Versailles အရပ် ဟာ
ခုဆိုရင် ပါရစ်မြို့တော် ရဲ့မြို့စွန်းသူဌေးရပ်ကွက်
ပါရစ် မြို့လယ်နဲ့ ၂ဝ ကီလိုမီတာ (၁၂ မိုင်) ဝေး
When the château was built, Versailles wasacountry village; today, however, it isawealthy suburb of Paris, some 20 kilometres southwest of the French capital.
၁၆၈၂ ကစ ၁၇၈၉ အထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ နိုင်ငံရေးအာဏာ တည်ရာရုံးစိုက်ရာ
The court of Versailles was the center of political power in France from 1682, when Louis XIV moved from Paris, until theroyal family was forced to return to the capital in October 1789 after the beginning of the French Revolution.
Versailles ဟာ အချုပ်အခြာအာဏာကိုစုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်စနစ်ရဲ့
သင်ကေတ အမှတ်အသား ဖြစ်
Versailles is therefore famous not only asabuilding, but asasymbol of the system of absolute monarchy of the Ancien Régime.
Palace of Versailles Facts | National Geographic Channel
Versailles is bothapalace (palais) andacastle (chateau). Members of the court at Versailles used both words interchangeably.
အပန်း ပြေ လမ်းလျှောက် စကားပြော လို့ရ၊
The Palace of Versailles was accessible to members of the public, who would gather for royal audiences, or even just to stroll and chat.
Louis IVဘုရင်က ပန်းခြံကို ခဏပိတ်လိုက်သော်လည်း၊
Damage to decorative vases and statues in the gardens once lead Louis XIV to make them private, but he later changed his mind, proclaiming that his beloved fountains should be “for the public”.
After its construction, Versailles soon became the subject of widespread admiration and was imitated throughout Europe.
နံရံနဲ့ခေါင်မိုးက အလှအပ ပန်းချီတွေယိုယွင်းပျတ်စီးမှာ
စိုးလို့ မီးကိုမှိန်မှိန်ဘဲထွန်းကာ၊ ဖယောင်းတိုင်တို့ရဲ့
သုံးလာတော့ နောက်ဆုံးမှာHall of Mirrors မှန်နန်းဆောင်ခန်းမ
The Versailles of old was dimly lit, as lighting was used sparingly to protect its ornate walls and ceilings from smoke damage. Mirrors gained favor asaway of boosting available candlelight, an infatuation that culminated in the Hall of Mirrors.
အခါကြီးမှာ ဖယောင်းတိုင်ချောင်းရေ နှစ်သောင်း ထွန်းပေးလို့
On grand occasions, twenty thousand candles and glittering chandeliers would be used to transform the Hall of Mirrors intoa“corridor of light”.
အပေါ်ကပုံတွေကို အောက်ပါ လင့်ခ မှရတာပါ၊
လင့်ခ ကိုဆက်ဆက် ကလစ်နှိပ်ပါ၊
ပေါ်လာတဲ့ပုံကြီး ကို Mouse နဲ့ကလစ်နှိပ်ပြီးဖိရင်း ဘေးတိုက်ဆွဲ၊ထက်အောက်ဆွဲပါ၊
Versailles Gallerie des glaces – Panoramiques 360 -panorama photo-360 degree QTVR
ဒီ ပြိုးပြိုးပြက်တောက်ပနေတဲ့ ခန်းမဆောင်ကို ဝင်ကြည့်ရတာတင် အရမ်းတန်သွားပြိမဟုတ်လားဗျာ?
Louis XIV, the Sun King, controlled his image using stringent etiquette and ceremony. Every mundane act, including getting up in the morning or going to bed, was turned intoaperformance that the public attended in reverence.
Louis IVက ရေပန်း တွေကိုအရမ်းစွဲလမ်းတွယ်တာလို့ ရေသွယ်စံနစ်ကိုလုပ်ရတယ်၊
သုံးချိုးတစ်ချိုးကို ၎င်းရေပေးစံနစ်တခုတည်းကပင် (ဝါးမြို) သုံးစွဲခဲ့ရ
Louis XIV hadapassion for fountains, and as much asathird of Versailles’ total building budget was spent on its water supply system alone
The Hall of Mirrors (Galerie des Glaces), originally known as the Great Hall (Grande Galerie), used to be an outdoor terrace. It was later converted intoadazzling indoor space to showcase one of Louis XIV’s most prized collections—his sculptures of antiquity.
အဲဒီ Hall of Mirrors မှန်နန်းဆောင်ခန်းမှာ ပဌမ ကမ်ဘာစစ်ကြီး ပြီးငြိမ်းလို့
Treaty of Versailles ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကို ချုပ်တာ၊
(ဂျာမနီ က စစ်လျော်ကြေးတော်တော်ပေးလိုက်ရ)၊
နောက်နှစ် ၅ဝ ကြာတော့ အဲဒီခန်းမမှာဘဲ ဂျာမနီက
(ဒုတိယ ကမ်ဘာစစ် အတွင်းမှာ စစ်နိုင်တုန်း) ဂျာမနီအင်ပိုင်ယာ
The Treaty of Versailles, which officially ended the First World War, was signed in Versailles’ stunning Hall of Mirrors. It was also in this very room that, nearly five decades earlier, Germany had declared itself an empire.
ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆန်းပြားလှတဲ့ မူရင်းတန်ဖိုးနဲ့ ရှေးဟောင်းတန်ဖိုးကိုပါပေါင်းထည့်ထားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ (သူတို့နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသူားတွေအတွက်) တကယ့်အမွေအနှစ်ပဲ။
မန်းလေးက မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုတောင် ဟိုးတုန်းက ဘယ်လိုဘယ်ပုံများဖြစ်နေလိမ့်မလဲလို့ တွေးကြည့်မိတယ်။
မေရီ အင်တွိုင်နက် ရဲ့………
ပေါင်မုန့်မရှိ ကိတ်မုန့်စားကြပစေပေါ့ ဆိုတဲ့ စကားထွက်လာတာ မဆန်းတော့ဘူး ဆိုရမလားးး
ဖယောင်းတိုင်နှစ်သောင်းကျော်ထွန်းထားတာ အရမ်းလှတယ်.. ဒါပေသိ.. အိုက်ဖယောင်းတိုင်တွေကုန်သွား ရင် ထပ်ထွန်းဖို့ လူတွေစောင့်နေရမယ်ထင်တယ်…
တည်ဆောက် လှူဒါန်းပြီးရင် ပြီးရော၊
အယင်က စာထဲမှာဘဲ ကျားဖူးခဲ့ဒါ
အခုမှ တွေ့ဖူးဒေါ့ဒယ် …
ဒါ့ထက် ဖယောင်းတိုင် ကိစ္စလေး မေးခွင့်ပုဘာ ..
အိုက်ဒါ ဖယောင်းတိုင် အစစ်တွေလား၊ လျှပ်စစ် ဖယောင်းတိုင်တွေလား တိဘာရစေ ခည ..
ဖယောင်းတိုင်ပုံလို ဓာတ်ငွေ့ပါတဲ့ မှန်မီးလုံးဆင်တူ
ဓာတ်အားမရလို့ ဆန္ဒပြ တာ
ရိုးရိုးချိန်မှာ ဖယောင်းတိုင် ချောင်းရေ ၃၀၀ဝ ထွန်းခဲ့ကြောင်း၊
သို့သော် စရိတ်ကြီးလို့ ရံဖန်ရံခါ မ ဟုတ်ကြောင်း၊
အခါကြီးရက်ကြီးတွေကျတော့ ချောင်းရေ တသောင်း၊နှစ်သောင်း ထိ
ပုံတွေ အားလုံးပေါ်အောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ပြီး ဝင်ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။ အရမ်းခမ်းနားလိုက်တာဗျာ… သူတို့နိုင်ငံသားတွေကတော့ သိပ်ကို ဂုဏ်ယူကြမှာပဲနော်။
ကြေးမုံဂျီးကို ပြင်သစ်လို ဖက်လှဲတကင်း အားပါးတရ နှုတ်ဆက်ချင်တယ်… ရှလွတ်..